Deals in Products | Myanmar Builders Guide - Best Building and Construction guide in myanmar
Offered by Tet Lu
အိမ်ခြံဝန်းများ သူခိုး ဓားပြ ရန်မှကာကွယ်ဖို့ဘလိတ်ဓားဆူးကြိုးသုံးကြပါစို့
မိမိအိမ် ခြံ ဝန်းလုံခြုံဖို့ တာရှည်ခံ ခိုင်ခန့်တဲ့သံဇကာလိပ်သုံးကြပါစို့
မိမိအိမ်လေးကို စမတ်ကျလှပအောင်အလှဆင်ပေးနိုင်ပါသည် ။
Offered by 999
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ အောက်ခံစတီးပြားအထူ၊ ကုတ်တင်အထူတို့နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ JFE MERANTI အမိုးပြားALZU7- ဆေးအာမခံ ၃ နှစ် သံချေးမတက် အာမခံ ၉ နှစ် ALZU 10 - ဆေးအာမခံ ၅ နှစ် သံချေးမတက်အာမခံ ၁၂ နှစ်
Offered by Mann Standard Co., Ltd.
STANDBY CONVEYOR-Large capacity.-Simple structure.-Convenient maintenance.-Low -energy consumption.-High performance belt conveyor.-Low noise.
Offered by Lucky Palace
made in Thailand ကြွေပြား၊ကျောက်ပြားများSize စုံ ဒီဇိုင်းသစ်များ
Offered by Yadanar Moe
စကားပြောစက် အသုံးပြုသော တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် မီးလင်း စကားပြောစက်တိုင်များ မှာယူနိုင်ပါပြီ ptt ခလုပ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ လိုင်းဆွဲအားကောင်း မီးအရောင်းများထွက်ပေါ်လာသော တိုင်များ မှာယူရရှိနိုင်ပါပြီ VHF - UHF အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။
Offered by Thu Ta Myint
-4Tons,8Tons,20Tons -8Tons ေျမတူးစက္အတြက္ Breaker ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။
Hyundai 6တန် 2007, 5000+နာရီ ကျူတီမူရင်း အင်ကျင်ကောင်း အခိုးမရှိ ပန့်ကောင်း မညှီး အောက်ပိုင်းအသစ်နည်းပါး ဘွန်းအမ်းဘားကပ်ချောင်တာမရှိ Air-con အေးမှအေး စက်ကသွက်မှသွက်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ အောက်ခံစတီးပြားအထူ၊ ကုတ်တင်အထူတို့နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ JFE MERANTI အမိုးပြားALZU7- ဆေးအာမခံ ၃ နှစ် သံချေးမတက် အာမခံ ၉ နှစ် ALZU 10 - ဆေးအာမခံ ၅ နှစ် သံချေးမတက်အာမခံ ၁၂ နှစ် Made in-KOREA
အရေးပေါ် ယာဉ်တန်းသုံး LED flight light
အရေးပေါ် ယာဉ်တန်းသုံး LED flight light အနီ-အနီ /အနီ-အပြာ /အဝါ-အဝါ မီးသီသန့် ပါ - (အသံမပါ)